नागरिक हुन खोज्दा खोज्दै पाएको दुःखले आँशु पनि रित्तियो ! | News Polar
नागरिक हुन खोज्दा खोज्दै पाएको दुःखले आँशु पनि रित्तियो !
काठमाडौ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ निवासी यवेश अधिकारी , सर्लाहीकी अञ्जली साह, भरतपुर महानगरपालिका–१ निवासी विकास नेपाली, काठमाडौँ महानगरपालिका ९ निवासी सरिता श्रेष्ठ,धनुषास्थित गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३का इन्द्रजीत साफी र महोत्तरीका अर्जुन साहको पीडा एउटै छ । हामी राज्य बिहिन भएर कहिले सम्म बस्ने ? उहाँहरुको प्रश्न छ हाम्रो अपराध के हो किन राज्यले बिभेद गर्छ र नागरिक बन्न पनि दिदैन । यहि देशमा जन्मेर कहिले सम्म राज्य बिहिन भएर बस्ने ?
संविधानको धारा १२ मा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ तर पनि यवेश अधिकारीले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु भएको छैन । उहाँजस्तै नागरिकता पाउन बाट बञ्चित भएकाहरुले आफ्नो पीडा संञ्चारकर्मी ससंग बाड्दै नागरिकताको नाममा किन छलकपटको राजनीति भै रहन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले बुधबार भर्चुअलबाट आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनिहरुले राज्य संग अनुरोध संगै आक्रोश पनि ब्यक्त गरे । आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने यवेश जस्तै सर्लाहीकी अञ्जली साहलाई छ महिना नपुग्दै बाबुले छोडेकाले अहिले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पटकपटक प्रयास गर्दापनि असफल हुनु परेको छ ।
नागरिकता नभएकै कारण साहले विदेश गएर पढ्ने अवसरसमेत गुमाउनुभयो । नागरिकताकै कारण रुचि नभएको विषय पढ्नु परेको र काम गर्नसमेत नपाएको उहाँको गुनासो थियो । यस्तै आमाको वंशजको नागरिकता भए पनि बागलुङ निवासी अञ्जलीलाई भनै नागरिकताकै लागि भौँतारिरहनुपरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१ निवासी विकास नेपालीले पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन सक्नुभएन । अहिले आमा बितेपछि दलालले आमाको नामको जग्गासमेत हडपेका छन् ।
प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नसकेपछि आफूले रोजगारीबाट हात धुनुप¥यो । अध्ययन गर्न लिएको ऋणको ब्याज बढ्दै गएकाले अहिले आफू र आफ्नो परिवार नै चिन्तामा डुबेको छ । “साहुको ऋण बढेर रु १५ लाख भएको छ, रातदिन पैसा माग्न आउँछन्, नागरिकता नभएकै कारण मैले पाएको निजीस्तरको जागीरसमेत गुमाउनुप¥यो, अब मैले कसरी ऋण तिर्नेरु, साहूको सधैँको किचकिचले आत्महत्या गरौँ कि जस्तो लाग्न थालेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रकाशित : श्रावण ०६, २०७८, १७:३०:५१